Sajoo Faayilii Gulaali haalata gulaallii kakaasuf ykn kaka'umsala fayyadami.
Akka PDF Sudaadan Alergi
Faayilii sududaan maxxansaa
qindoominoota maxxansa durtii ammee galmee kaka'aa wajjiin maxxansuuf Sajoo Faayilii sududaan maxxansi cuqaasi. Kunis kan argamu qaaqa Qindoomina Maxxansaa keessatti, kan nuti ajaja baafata Qindoomina Maxxansaa wajjiin waamuu dandeenyudha.
Ufmaan yeroo barreessitu qubeessuu mirkaneessa, akkasumas dogoggora jala sarara.
Dhangii birushii qalamaa
Garagalcha dhangii barruu ykn wanta akkasumas filannoo dhangii barruu ykn wanta birotti fayyadamuu dandeessa.
Sajoo Dhangii Burushiiqalamaa kamshaa Durtiiirra jiru cuqaasi.
Dalagaawwan kaasu mul'isi
Kabala kaasaa banuuf ykn cufuuf bakka bobboca, sararoota,barruu fi balballoomiiwwan galmee ammetti dabaluu barbaaddetti cuqaasi
Barbaadi & BakkabuusiBarbaadi & Bakkabuusi
Barbaadi fi Bakkabuusi
Kuusaawwan deetaa kanLibreOffice keessatti galmaa'an tarreessuun qabeentoota kuusaawwam deetaa akka taliigduu si'I gargaara.
Barruu kee keessaa arfiiwwan maxxansalaa akka kudhangii keewwataa, cita sararaa, dhaabduu caancalaaf iddoowwanii mul'isa.
Galmicha ammee keessatti taattoo tokko uuma.
Gadee Fooyi / Olee Fooyi
Tarjicha isa qaree of keessaa qabu fayyadamuudhaan, gatii filannoocha ol irraa gara gadiitti fooya, ykn gara gadii irraa gara oliitti fooya.
Gabate haaraa islaayidicha yookin fuulicha ammaa keessa saaga.
Amaloota wanta G-3 murteessa yookiin wanta G-2gara G-3tti jijjiira.
Sajoo Naannawaa Banaa/Cufaa jedhu cuqaasi Naannawaa dhoksuu ykn mul'isuuf.
Teessuma Mul'annoo $ Guddisuu
Agarsiisaa argii LibreOffice xiqqeessa ykn guddisa. Dhimma guddisuu ammee akka gatii dhiibbeentaattikabala Haloojii agarsiisera.
URL saagameen galmee ifteessame fe'i. URL haaraa duraan galmaa'e barreessuu ykn filachuu ni dandeessa. LibreOffice ofummaaan karaa faayilii gara ibsa URLtti jijjiira.
Title is: Kabala Durtii